Archive du 20161224
Vadina Filoham-pirenena Ny 2 miasa, ny 1 manao fiainana
Samy manana ny fomba mahazatra sy fihetsika mampiavaka azy ny vadina filoham-pirenena manerana izao tontolo izao ary tsy ambaka amin�izany ny eto amintsika, na ireo vadina filoha teo aloha na ny am-perinasa.
Ny mpitondra mifety be Ny mpampianatra FRAM tsy mahazo vola
Tanteraka ara-bakiteny ilay hoe �mitango lalitra�, raha dinihina amin�ny mahazo ireo mpampianatra FRAM. Tamin�ny hafatra nalefan�ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena,
Fifidianana amin�ny 2018 Miezaka ny manatsara tena ny CENI
Namintina ireo dingana sy asa vitan�ny CENI (Commission Electorale Nationale Ind�pendante) nandritra ny taona 2016 teny amin�ny birao foibe Alarobia omaly ny filohany Rakotomanana Hery.
Roland Ratsiraka Tsy te haloto miaraka amin'ny HVM
Ao anatin�ny governemanta ankehitriny i Roland Ratsiraka saingy re fa hirotsaka hofidiana filoham-pirenena amin�ny 2018, ary efa manomboka mandeha ny serasera momba ny hirotsahany.
Taratasin�i Jean Mampiditra mpamono olona
Tena mandreraka ahy mihitsy ny miresaka aminareo ity ry Jean ka ! Miarahaba aloha ! Tsy tadidinao angaha ilay namako niteny iny hoe aza mampiditra mpangalatra ao an-trano
�Glace� Tiko Efa eny amin�ny tsena
"....fa ny tarigetranay, izay hotanterahina, hanasoa ny namanay sy ireo mpiara-belona....", ampahany ao anatin�ny tononkira faneva AAA-TIKO, io.
Laharam-pahamehana ny fahadiovana sy ny fandaminana ny tsena Nizara fanomezana ho an�ireo mpiasa sy ny solontenan�ny mponina avy ao amin�ny boriborintany faha-III eto Antananarivo Renivohitra
Ankadimbahoaka-Anosizato Feno trano miorina ny fefiloha
Maniry toy ny anana ny trano miorina eo ambony fefilohan�Ikopa hatreo Ankadimbahoaka mipaka any Anosizato Atsinanana. Taorian�ny tetezamita no ho mankaty no tsapa fa nahamaro ny asa fanorenana tamin�iny faritra iny.
Tandroka aron�ny vozona Voailikilika ireo zokiolona mpisotro ronono
Nisy ny fanitsiana tabilao mari-karama na �alignement du grille indiciaire� ho an�ny fianakaviamben�ny tandroka aron�ny vozona ny taona 2005.
Volan�ny kaominina Mbola mandoa ireo vary mangatsiaka ny fanjakana
Mijanona amin�ny famadihana ireo taratasim-bola ho lasa kaontim-bola misoratra amin�ny anaran�ireo kaominina ny andraikitry ny minisiteran�ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana.
ZAITRA Niampy 130 indray ireo matihanina
Tsy mitsaha-mivoatra ny tontolon�ny zaitra eto amintsika mba hahafahana manome lanja ny vita Malagasy.
Hopitaly CHU-JRA Nahazo fotodrafitrasa vaovao indray
Nohavaozina tanteraka ny sampandraharaha fandidiana momba ny kibo ho an�ny ankizy madinika etsy amin�ny h�pitaly CHU-JRA Ampefiloha.
GROUPE DES JEUNES MALGACHES SOLIDAIRES Hizara vatomamy ho an'ny ankizy sahirana
Hanangona vatomamy, s�k�la ary bisikoitra hozaraina amin�ireo ankizy sahirana eto an-drenivohitra ny � Groupe des jeunes Malganches solidaires �.
Paul Rabary Mila ovaina ny rafi-panabeazana
Nanazava ny minisitry ny fampianarana Paul Rabary fa ilaina ny miroso amin�ilay rafi-panabeazana vaovao dia ny famitana izany ao anatin�ny 3 taona in-telo miantaona na 9 taona
�La Voix d�Or� Iza no hihazo ny Disneyland-Parisy ?
Anisan�ny hanamarika ny fankalazana ny Noely amin�ity 2016 ity ny famaranana amin�ilay fifaninanan-kira �La Voix d�Or� karakarain�ny Televiziona VIVA.
Amboanjobe-Bongatsara Ritra hatramin�ny rano anaty vovo
Manahirana ny fahazoana rano amin�ny kartie maro eto an-drenivohitra sy ny manodidina.
FUN QUIZZ 22 Norombahin-Ratsimbanirina Nivomalala ny fiara
Notanterahina omaly zoma 23 desambra teny Ankorondrano ny fanolorana ilay loka goavana tamin�ilay lalao Fun quizz 22 nokarakarain�ny Airtel.
Todiho ny lasa, banjino ny ho avy !
Anatin�ny fety tanteraka isika amin�izao fotoana izao ary samy manana ny fomba hankalazany azy ny isan-tokantrano sy ny isam-pianakaviana.